Wasiir kuxigeenka Gaashaandhigga ayaa si adag uga falceliyey Warmurtiyeedkii Golaha Nabadda… – Hagaag.com
Wasiir kuxigeenka Gaashaandhigga ayaa si adag uga falceliyey Warmurtiyeedkii Golaha Nabadda…
Posted on 24 Abriil 2021 by Admin in National // 0 Comments
Wasiir Kuxigeenka ayaa sheegay inaanay Ciidanka AMISOM sharciyad u haysan la socodka dhaqdhaqaaqa ee Ciidamada Somalia, ka dib soo jeedintii Golaha Nabadda & Amniga ee Midowga Afrika ee ahayd in AMISOM la socoto dhaqdhaqaaqooda.
“Midowga Afrika waxay soo saareen dhaqdhaqaaqa Ciidamada Somalia waa in lala socdaa. AMISOM mandate-keyda maka mid yahay mise waxaa weeye in Xarumaha Dowladda iyo Madaxda Qaranka waardiyeeyaan, sidoo kalena la dagaalamaan kooxaha argagixisada. Ciidamadii aan rabnay anaga inay iyaga ka madax-banaanaadaan miyaa hadda la leeyahay ciidamada ha waardiyeeyaan, maxay ka waardiyeynayaan? Ma shacabkeena ayay cunayaan ciidanka? Ciidanka waa Soomaali, dalka, dadka, dowladda iyo xorriyadda ayagaa iska leh.” Ayuu yiri Wasiir Kuxigeenka Gaashaandhigga oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Wasiir Kuxigeenka ayaa su’aal ka keenay waxa isku soo beegay warka Midowga Afrika iyo hadaladii ka horeeyay buu yiri ee ragga walaalaheen ah meelaha ku hayeen.
“Maxaa kulmiyay hadalkan ka soo baxay Midowga Afrika iyo hadaladii ka horeeyay ee ragga walaalaheen ah meelaha ku hayeen ee ahaa ciidamada haka soo baxaan iyo ciidamada haka yaacaan. Anagoo ognahay jug xun inay nagu dhacday 1991-kii markii aan Ciidankeenii Qaranka kala dirnay, maxaa kulmiyay labadaa?” Ayuu yiri Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim Maxamuud, Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Somalia.
Dowladaha deriska qaarkood ayuu ku eedeeyay inaanay doonayn inay Somalia yeelato dowlad adag iyo weliba ciidan dhisan.
“Dowladaha qaar ee deriska ah oo aan dooneynin in dowlad adag iyo ciidan xoogan uusan dhismin inay qodobkaas ugu darsadeen, ma dareemaysaan?” Ayuu yiri Cabdifitaax Qaasim Maxamuud oo sidoo kale ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Waxaa uu intaa ku daray “Waxaana u raacinayaa ciidankeena maaha maleeshiyaad meel ku xareysanoo cid kastaba kaalay iska dhaheyso si ku-meel-gaar ah wax baan kuu siinayaa, berritana markaan danteyda gaaro iska socaa ku dhahayaa, maaha. Waxay haystaan dowlad xuquuqdooda iyo daryeelkoodaba u dhameystirtay, intii ay jirtay 4-taan sano iyo billaha yar.”